To invest in real estate or to invest in financial institution?
အိမ်ခြံမြေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလား? ဘဏ်မှာငွေအပ်ပြီး ဘဏ်တိုးယူမလား?
As people gets more financially secured and savvy, they deliberate between investing in real estate or gaining interests from their bank deposits. The final deciding factors between investing in real estate or depositing their savings inabank boils down to three factors. The rate of returns, the credibility of the real estate developers or financial institutions and the risks involved.
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ငွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့ စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေ အမြဲသုံးသပ်တတ်တာကတော့ အိမ်ဝယ်ထားမလား၊ ဘဏ်မှာပဲပိုက်ဆံအပ်ပြီး ဘဏ်တိုးယူမလားဆိုတာပါ။ အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးပြီဆိုရင်တော့ အဓိကထားစဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက် (၃)ချက်ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာကနေ လစဉ် (သို့) နှစ်စဉ်ပုံမှန်အကျိုးအမြတ် ဘယ်လောက်ပြန်ရနိုင်မလဲ?
- ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အိမ်ခြံမြေတည်ဆောက်သူ (သို့) ခိုင်မာသေချာတဲ့ ဘဏ်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရဲ့လား?
Real estate investment is less risky than other investments as the value of land and property appreciate over time, especially so when you invest your monies withatrusted real estate developer, or what we call capital appreciation. When the land appreciates, the rental rates goes up as well. So if you lease out your property, the returns is higher.
အိမ်ခြံမြေဆိုတာကတော့တန်ဖိုး ကျသွားတယ်လို့မရှိဘဲ အမြဲတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် အိမ်ခြံမြေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းက ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုတန်ဖိုးအမြဲတက်နေတာကို Capital Appreciation လို့ခေါ်ပြီး အိမ်ဈေးတွေတက်လာတာနဲ့အမျှ အိမ်ဌားခတွေလဲ လိုက်တက်လာတဲ့အတွက် အကျိုးအမြတ်လဲများလာပါတယ်။
If you are looking at gainingahigher return on your investment, projects at Pun Hlaing Estate would meet all your criteria. Contact our sales team to know more: 09 777 229 449 (or) punhlaingsales@yomaland.com. Please do visit our official website:
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်တော့ အထက်မှာ ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတွက် အကျိုးအမြတ်များများရမှာ သေချာပါတယ်။ အသေးစိတ်သိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ 09-777229449 / punhlaingsales@yomaland.com ကို ခုပဲဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုက်ပါနော်။